Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii xubnaha Faraca Johannesburg ee Jaaliyada JOKA oo Qabsoomay.
Shirkii xubnaha Faraca Johannesburg ee Jaaliyada JOKA oo Qabsoomay.
Waxaa shir muhiim ah ku yeeshay magaalada Johannesburg Xubnaha iyo Maamulka Jaaliyada JOKA gaar ahaan faraca ka hawlgala magaalada Johannesburg iyo nawaaxigeeda.
Shirkan oo ahaa mid si heersare ah loosoo agaasimay ayaa waxaa kasoo wada qaybgalay hawl-wadeenada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee Jaaliyada Somalida Ogadenya ee JOKA.
Furitaankii shirka kabacdi, waxaa lagu soo bandhigay qodobo muhiim ah oo ku saabsan xaalada guud ee Halganka Somalida Ogadenya. Waxaa kaloo aad looga dooday xaalada Gumaysiga Itoobiya iyo marxalada cusub ee lasoo daristay taliska taagta daran ee TPLF.
Gudoomiyaha Faraca Johannesburg ee Jaaliyada JOKA ayaa dhankiisa ku booriyay xubnihii iyo masuuliintii kulankan kasoo qaybgalay inay kaalintooda kaga aadan waxqabadka iyo horumarinta halganka ka gaystaan. Sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay kulankan khudbado iyo afkaar aad u qiimo badan oo kusaabsan sidii loogu midoobi lahaa hanashada xoriyada mudada dheer la higsanayay.
Kulankan ayaa kusoo dhamaaday jawi aad u wanaagsan iyadoo ujeedadii loosoo agaasimay iyo qorsheyaashii lagu soo bandhigay laga yool gaadhay, waxay xubnuhu isku balansadeen sidii loo hirgalin lahaa waxqabadka halganka.